Yaa qaadayo mas’uuliyada dib u dhaca ku yimid doorashooyinka? | Dalkaan.com
Home Warkii Yaa qaadayo mas’uuliyada dib u dhaca ku yimid doorashooyinka?
Yaa qaadayo mas’uuliyada dib u dhaca ku yimid doorashooyinka?
Muqdisho (dalkaan) – Golaha Midowga musharixiinta mucaaradka ayaa war xasaasi ah kasoo saaray dib u dhaca markale ku yimid jadwalka doorashooyinka dalka.
Previous articleCiidamada Ahlu Sunna oo isaga baxay Matabaan iyo wararkii ugu dambeeyey
Next articleMidowga Musharaxiinta oo WEERAR culus ka qaaday Golaha Wadatashiga Qaran
Xavi oo war kasoo saaray Xaalada Barcelona isagoo badaley go’ankiisa Barcelona
Ciyaaryahankii hore ee qadka dhexe ee kooxda Barcelona Xavi ayaa xaqiijiyay inuu dhageysan doono dalabka La Blaugrana haddii shaqada tababaraha loo soo bandhigo. ...
Italy 1-2 Spain: Xulka La Roja oo Jabiyay Rikoodhkii Italy iskana...
Daawo: Guddoomiyaha Kaaraan oo weerar ku qaaday Saney Cabdulle iyo beesha…
Ahlu Sunna oo war culus kasoo saartay dagaalka ka qarxay Galmudug